Ukubuya kwamakhasimende eGuanyu kuhlala kukholwa ukuthi ukwaneliseka kwamakhasimende kubalulekile njengokuphila. Namuhla, silandelela ikhwalithi yomkhiqizo weLiqun Pharmaceuticals. Sixoxisane nabasebenzi abaphambili emgqeni wokukhiqiza futhi banelisekile kakhulu ngebhokisi lezinto ezikhiqizwe yiGuanyu Gr ...
Ibhokisi lokungenisa imali lidlala indima ebaluleke kakhulu embonini yokugcina impahla kanye nasekulungisweni kwempahla. Ibhokisi lenzuzo lingasebenzisana neziqukathi zokuphathwa kwezinto nezindawo zokusebenza ukusiza amabhizinisi aqedele ukwenziwa jikelele kanye nokuphathwa okuhlanganisiwe kweziqukathi zokuphathwa kwezimpahla emafektri ahlukahlukene nasekukhiqizeni ...
Indima yamabhasikidi enzuzo epulasitiki ku-logistics yemifino
Obhasikidi bezinga eliphakeme lokuphuma kwepulasitiki ikakhulukazi benziwe nge-polypropylene entsha eluhlaza. Azinabo ubuthi futhi azinabungozi futhi ngeke zingcolise imifino. Ziyahlanzwa ngesikhathi ukuze zigcinwe zicocekile futhi azisoze zaba yisikhunta nokubola, okungcono kune-bamboo. Obhasikidi nobhasikidi bokhuni ...
Ngabe ukushuba kwebhokisi lepulasitiki kuthola ikhwalithi?
Ukujiya kwebhokisi lepulasitiki, kusinda kakhulu. Ngokombono wezobuchwepheshe, ukukhetha ubhasikidi wenzuzo wepulasitiki kungasuselwa ebulukhuni nasebukhulu Imikhiqizo yePulasitiki ichichima kuzo zonke izici zokukhiqiza nempilo, kepha abantu abaningi abazi ukuthi bangakhetha kanjani ipulazi lekhwalithi ethembekile ...
Uyemukelwa abasebenzi abasha
NgoJanuwari 2, 2019, uMnyango Wezabasebenzi waseGuanyu Plastics Co, Ltd. wabamba umkhosi wokwamukela abasebenzi abasha beGuanyu Group ngo-2019. Bavela ezifundeni ezahlukahlukene kepha bazimisele ukufaka isandla eGuanyu Plastics. Umsebenzi ngamunye wethula ngolimi olufushane. Ngoba ...
Ukwabelana ngolwazi lokugcina
1 layoutUkuhlelwa okunengqondo kwendawo yokugcina izinto Akuyona indawo lapho izimpahla zigcinwa khona kuphela, kodwa futhi yindawo lapho kwenziwa khona umsebenzi wokuqoqa, wokusabalalisa nokuphatha. Ukuze kube lula ukuqhubeka kahle kwale misebenzi, kufanele kube nokuhleleka okufanelekile. I-warehou ...
Umkhiqizo omuhle wokugcina uqala ngezinto zokusetshenziswa zekhwalithi
Muva nje, iChina ihlaselwe udoti ongenisiwe. Kusetshenziswa inqwaba kadoti wepulasitiki ukwenza imikhiqizo ehlukahlukene yepulasitiki. Kubeka engcupheni impilo yabantu. Eminyakeni engu-20 edlule, Qingdao Guanyu ubelokhu esebenzisa izinto zokusetshenziswa ezintsha, kodwa imikhiqizo efanayo umkhakha ngokuvamile exutshwe kabusha ...
Siyakuhalalisela i-Qingdao Guanyu ngokuwina izindondo ezintsha
Muva nje, iQingdao Guanyu Plastic Co., Ltd. iklonyeliswe ngesiqu esithi “Integrity Enterprise” yiminyango efanelekile yoHulumeni kaMasipala waseQingdao, futhi yaba ngumholi waleli dolobha kule mboni efanayo. Qingdao Guanyu inikeza izixazululo zokwenziwa kwemithi kanye nokugcina impahla ...
Ungalikhetha kanjani ibhokisi lezimpahla ngendlela efanele
Abakhiqizi bebhokisi lokuphuma kwepulasitiki eliphephile ikakhulukazi basebenzisa okokusebenza kwebanga le-PP elinobungako bemvelo, okwakhiwa ngasikhathi sinye ngobuchwepheshe bokubumba bokujikeleza obuthuthukile. Ubuhle ukuthi ifakwe ingidi, kanti ngezansi kufakwe iphedi yokulwa nesikidi yerabha, engeyona eye-toxi ...
Umehluko phakathi kokushaya i-pallet ne-injection pallet
Umthwalo omkhulu onamandla we-pallet yomjovo ungafinyelela ku-2t, futhi umthwalo omkhulu we-static ungafinyelela ku-10t. Impilo yayo yesevisi ingafinyelela ngaphezu kweminyaka engu-3. Ngenxa yesisindo esincane sephalethi lomjovo, intengo ishibhile kunepallet eshaywayo, futhi abakhiqizi abaningi abayidingi i-pall ...
Imibuzo ejwayelekile nezimpendulo zeziqukathi zenzuzo
1.Yini impahla yeziqukathi zokuphuma zeplastiki ezisetshenziswa kakhulu? Iziqukathi zentengo zepulasitiki ezisetshenziswa kakhulu zenziwa nge-PP ngenxa yempilo yayo ende yokusebenza, ukubukeka okuhle nemibala egqamile. 2.Yiziphi izidingo zokubekwa kweziqukathi zenzuzo? Ilungele ukuhambisa amabhokisi a ...
Umehluko phakathi kwemigqomo yama-hang nemigqomo yesitaki
Umgqomo wokugcina wepulasitiki wuhlobo lwemishini yokugcina yokugcina izingxenye ezahlukahlukene. Inezici zokumelana ne-acid ne-alkali, ukumelana namabala kawoyela, okungeyona into enobuthi futhi engenaphunga, okulula ukuyihlanza, ebekwe ngobunono, futhi kulula ukuyiphatha. Ngokuya ngokubukeka, sebenzisa isikhathi, umthwalo wokuthwala kanye ...
Imigqomo Yesitoreji Esinqwabekile, Imigqomo Yokugcina Isitoreji, Imigqomo Yesitoreji Esibekiwe Epulasitiki, Imigqomo Yokugoqa Ngeplastiki, Ukubeka Imigqomo Yokuthatha, Isitaki nama-Hang Bins,